तरकारी र माछा प्यूरी - Thermomix रेसिपीज ThermoRecines
यो एक नुस्खा हो म धेरै पटक बनाउँछु किनकि मँ मेरो बौनाहरु थिए। यो एउटा हरी तरकारीहरू de बच्चाहरु मा खाना को शुरुवात धेरै पूर्ण र पौष्टिक।
मलाई अझै याद छ पहिलो म्याश मैले मेरो जेठोलाई के गरें ... हे भगवान! मैले मुश्किलले उसमा पानी छोडें र यो यति बाक्लो थियो कि मलाई थाहा छैन कि उसले कसरी यसलाई निगल्न सक्छ, तर उसले गर्यो। तब मेरी आमाले मलाई किताब दिनुभयो Thermomix® संग शिशु खुवाउने र सबै कुरा परिवर्तन भयो।
म किताब मा लगभग सबै purees बनाउन र उनीहरु सबै उनीहरुलाई माया गर्छन्। यद्यपि यो एक आज तरकारीहरु को एक संयोजन हो कि म सामान्यतया धेरै बनाउँछु माछा संग चिकन वा मासु संग र यो स्वादिष्ट बाहिर आउँछ।
1 तरकारी र माछा प्युरी
बच्चाहरूको लागि स्टार्टर प्युरी ... र त्यत्ति बच्चाहरू होइन !!
खाना पकाउने समय: 45M
G० ग्राम ताजा हरियो सिमी
G० g चार्ट
G 350० फ्रिजन हाक फिललेटहरू
पहिले हामी सबै तरकारीहरू तयार पार्दछौं, यसलाई धुन्छ र यसलाई टुक्रा-टुक्रा पार्छौं।
हामीले गिलासमा लीक, गाजर, आलु र जुची राख्यौं। हामी प्रोग्राम Seconds सेकेन्ड गतिमा। हामी तेल र कार्यक्रम थप्छौं Minutes मिनेट, १००º, गति १।
सिमी, टमाटर र चार्ट थप्नुहोस्। Sauté Minutes मिनेट, १००º, गति १।
हामी नुन र पानी थप्छौं। हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, १००º, गति १।
समयको साथ, हामी ह्याक लोन्स, प्रोग्रामिporate समावेश गर्दछौं Minutes मिनेट, १००º, गति १।
अन्त्यमा, हामी यसलाई केहि मिनेटको लागि रिस र ग्राइन्ड गरौं १ मिनेट, गति 1.
त्यसपछि यो एक धेरै राम्रो बनावट संग छोड्न, हामी अन्य कार्यक्रम Minutes मिनेट गतिमा।।
थप जानकारी - परम्परागत तरकारी प्यूरी
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: Celiac, सजिलो, ल्याक्टोज असहिष्णु, अण्डो असहिष्णु, १ घण्टा भन्दा कम, माछा, बच्चाहरूको लागि व्यंजनहरु, सूप र क्रिम
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » विशेष व्यंजनहरु » Celiac » तरकारी र माछा प्युरी
यो प्यूरीले धेरै माछाको स्वाद लिन्छ…।
यदि त्यो केस हो भने, मेरी छोरीले पनि स्वाद चाख्दैन, तर यदि यो थिएन भने, यो उनको लागि माछा खानको निम्ति उत्तम तरिका हुनेछ।
मलाई केहि ठीक छ भन
Joaquin लाई जवाफ दिनुहोस्
जोआक्विन, तपाईंसँग उत्तम स्वाद मिश्रण छ। यो अत्यधिक माछाको स्वाद गर्दैन। प्रयास गर्नुहोस् र यदि तपाईंको छोरीलाई यो मन परेन भने, कम माछा थप्ने प्रयास गर्नुहोस्। तर मलाई लाग्दछ कि तपाईं यो तरीकाले यो मनपर्नुहुनेछ तपाईं हामीलाई भन्नुहुनेछ। शुभकामना।
धन्यवाद सिल्विया !!! माइन पहिले नै पुरानो छ, ती मध्ये तीन जसो हो, तर बेलुकाको खानामा जहिले पनि केही तरकारीहरू हुन्छन् र कहिलेकाँही शुद्ध, यस हप्ता यो निश्चित हुन्छ र म ह्याकलाई टाढा राख्नु हुँदैन। उनी शिशु पोषण को मन पराउँछन्, एक कि Jamon Serrano सबैभन्दा अन्धा जान्छ !!!!
अँगालो र तपाईका व्यंजनहरु को लागी धन्यवाद !!
तपाई महान् हुनुहुन्छ, अब दुई! म तिमीलाई मन पराउँछु! के राम्रो रिसेप्स र साथै, पनी मेरो पार्टनर सुरु हुन्छ तपाईंको ब्लग लाई जस्तै, हाहा। म तपाईंलाई सोध्न चाहन्छु ... तपाईं के माछा मार्फत जाल हाल्नुहुन्छ जब तपाईं यसलाई भाप गर्नुहुन्छ? प्राप्तिकाबाट केहि भिन्नता? आईटी भनेको यो हो कि म धेरै फ्लावरुड आउँछ ... र थप्ने क्रममा, जस्तो कि मलाई नुनको खण्डन मन पर्दैन, आईटी एकदम नराम्रो कुराको बाहिर आउँछ ... फ्लावर बिना। मलाई थाहा छैन के यो थप टेस्ट टच दिनुहोस्।
धन्यबाद तपाईं ती लड़कीहरु र बग संग अगाडि जानुहोस् !!! यो ठूलो छ र तपाइँले सोच्नु भन्दा बढि मद्दत गर्नुहोस् ...
JAÉN बाट अभिवादन
धेरै धेरै धन्यबाद, शीला। यी टिप्पणीहरूको साथ तपाईले हाम्रो व्यंजनहरू जारी राख्नको लागि हामीलाई प्रोत्साहन दिनुहुन्छ।
माछाको सन्दर्भमा, मलाई यो नुन र थोरै लसुन पाउडर मात्र मन पर्छ। सत्य यो हो कि मैले मात्र थपेको कुरामा पार्सली, लसुन र नुन हो।
यदि तपाईं उमालेको माछा मनपराउँनुहुन्छ, एक पटक तपाईं यो पकाएपछि र चाँदी मा, तपाईं एक सानो सिरका क्रीम थप्न सक्नुहुन्छ।
जब म माछालाई उमालेको बनाउँछु, म केहि गाजर पट्टी र केही स्टीम्ड आलु राख्छु, प्रयास गर्नुहोस् र मलाई भन्नुहोस्
कस्तो राम्रो, Pilar! म यो प्रमाणित गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद।
नमस्कार !! म तपाईलाई मलाई मद्दत गर्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, मैले दुईपटक आलुहरू सँग भाँडामा पकाउने विधि बनाएको छु र तिनीहरू शुद्ध बाहिर आउँदछन् म २१ औं दिनमा छु।
एआरवाई लाई जवाफ दिनुहोस्
तिनीहरू टुक्राहरूमा बाहिर आउँदछन् तर शुद्ध होइनन्, तपाईंले चम्चाको गति तय गर्नु पर्छ र बायाँतिर मोड्नुपर्दछ, तर सत्य छ यदि दुई मिनेट पूरा गर्नु भन्दा पहिले तपाईंले स्यान्डविच प्रकारको चीजको दुई स्लाइस थप्नुभयो भने उनीहरू स्वादिष्ट छन्।
पिलर मैले तपाईको टिप्पणी राम्ररी बुझ्दिन, किनकि प्यूरी बनाउन तपाईले चम्चाको वेग सेट गर्नुपर्दैन वा बाँया पट्टि घुम्नु पर्दैन। यसलाई 5-- 10 १० को प्रगतिशील गतिको अन्त्यमा कुचल्नुहोस् र यो पूर्ण रूपमा आउँदछ।
यो कति राम्रो देखिन्छ, भोली म यो मेरो छोरीको लागि तयार गर्दैछु।
नाटी भयानक छ, यो कुरा निश्चित छ कि तपाईंको सानोलाई यो मन परेको छ, यो मेरो छोरीहरूको मनपर्ने छ।
नमस्ते केटीहरू, तपाईंले मलाई धेरै मद्दत गर्दै हुनुहुन्छ, मसँग केवल एक हप्ताको लागि थर्मोमिक्स छ र म नयाँ जुत्ता, चुम्बन सहितको बच्चाजस्तै छु।
Almudena लाई जवाफ दिनुहोस्
हाम्रो धेरै थर्मोमाइजर अनुभवहरू साझेदारी गर्न र हामीलाई तपाईंको टिप्पणीहरू समृद्ध बनाउन यस प्रोजेक्टको लागि हो कि धेरै धेरै धन्यवाद, अल्मुदैना।
अभिवादन र त्यहाँ भएकोमा धन्यवाद।
स्वागत छ, अल्मुडेना! मलाई आशा छ कि तपाइँ हाम्रा रेसिपीहरू मनपराउनुहुन्छ र ती थर्मोमिक्सको अधिकतम बनाउन तपाइँले मद्दत गर्नुहुन्छ। शुभकामना।
नमस्कार, म जान्न चाहान्छु कि यदि स्थिर हेक फिललेटहरू प्रत्यक्ष रूपमा थप्न सकिन्छ कि तिनीहरूलाई पहिले डिफ्रोस्ट गर्नुपर्दछ
भिक्टोरिया तपाईं तिनीहरूलाई सिधा स्थिर फेंक गर्न सक्नुहुन्छ। म तिनीहरूलाई यो जस्तै फ्याक गर्छु र यो उत्तम बाहिर आउँछ।
सिल्भिया, मलाई माफ गर्नुहोस्, मैले सोचें कि तपाईंलाई यो कुचुरिएको मनपर्दैन, म यो नुस्खालाई कुचल्दिनँ, मलाई स्टम्पहरू भेट्टाउन राम्रो लाग्छ।
पिलर मैले यसलाई कुचें किनकि म यो मेरा साना छोरीहरूको लागि धुन्छु, तर मलाई यो पूरै मनपर्दछ।
नमस्ते सिल्भिया मलाई तपाइँका सबै व्यंजनहरू मनपर्दछ र तपाइँले मलाई हप्ताको मेनू आयोजना गर्न धेरै मद्दत गर्नुहुन्छ। म तपाइँलाई सोध्न चाहन्छु कि भिनिलोको टिप्पणी कहाँ छोड्ने हो। म सहभागी हुन कोशिस गर्नेछु र यदि म यो सोध्ने छैन भने। धेरै मौलिक हो र थर्मोमिक्सलाई फरक छुन्छ।
माभीलाई जवाफ दिनुहोस्
माभीले विनाइल पोस्टको अन्त्यमा तपाइँको टिप्पणी छोड्नुहोस्। हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद।
नमस्ते मावि, तपाईंले "Decorate your Thermomix with vinyls" पोष्टमा कमेन्ट गर्नु पर्ने छ, अर्थात् प्युरीको रेसिपीमा जसरी यो कमेन्ट राख्नुभएको छ, त्यसरी नै हामीले आज राखेको यो प्रकाशनमा कमेन्ट राख्नुभएको छ । यदि तपाईंलाई कुनै समस्या छ भने, कृपया हामीलाई थाहा दिनुहोस्। भाग्यले साथ दिओस्।
नमस्कार! यो प्यूरी बच्चाहरू र वयस्कहरू दुवैका लागि उत्कृष्ट छ।
धन्यवाद इसाबेल, मलाई खुशी छ कि तपाईलाई यो मन पर्यो। शुभकामना
नमस्ते केटीहरू, मैले तपाईंलाई भन्नु पर्छ कि मेरो थर्मामिक्स तपाईंलाई धन्यवाद दिन बाँच्न शुरू भयो। केही महिना अघि मेरो श्रीमान्ले मलाई यो वर्षको जिम्मेवारी पछि दिनुभयो र जब मसँग यो थियो मैले व्यञ्जनहरू बनाउने काम सुरु गरिन जबसम्म मैले अन्ततः तपाईंलाई हेरिरहेको पाएनन्। तपाईं धेरै मद्दतको हुनुहुन्छ, कृपया हामीलाई म जस्तै नयाँ बच्चाहरूमा हामीलाई नत्याग्नुहोस्, प्रश्न: म कसरी मात्रा कम गर्न सक्छु, समय घटाउन सक्छु? मसँग २ वर्षको केटी छ र प्यूरीस र मलाई उनको लागि र क्रीमहरू पनि हुन्छ, के अरु प्युरीहरूमा पनि यस्तै गरिन्छ?
सोनिया, तपाईं परिमाणहरू कम गर्न सक्नुहुन्छ, तर समय उनीहरू समानको लागि समान हो। तैपनि, मसँग २ साना छन् र कहिले काँही म पनि खाएर त्यो रकम बनाउँछु, तपाईंसँग लगभग दुई पटक हुनेछ र यदि तपाईं यसलाई स्थिर गर्न सक्नुहुन्न भने। मलाई एकैचोटि सबै रकम गर्न को लागी सहज छ। प्रयास गर्नुहोस् र मलाई भन्नुहोस्।
नमस्कार, तपाईंको व्यंजनहरु को लागी धन्यवाद, म कसरी दुई व्यक्तिको लागि रकम घटाउन सक्छु?
आधा मा रकम काट्नुहोस् तर समय उस्तै राख्नुहोस्।
धेरै धेरै धन्यवाद, म तपाईंलाई प्रशंसा गर्छु !!!
Mª एन्जलस भन्यो
नमस्कार, तपाईं केहि उत्कृष्ट व्यंजनहरू बनाउनुहुन्छ। ठिकै छ, मलाई खुशी छ कि मैले यो ब्लग फेला पारेँ, किनकि मसँग थर्मोमिक्स भएको years बर्ष वा थोरै भए पनि म अझै अनुभवहीन छु, किनकि मैले यसलाई थोरै प्रयोग गरेको छु। म जान्न चाहन्छु कि हरियो सिमी फ्रिज गर्न सकिन्छ कि, किनभने तिनीहरू जसमा म सामान्यतया प्रयोग गर्छु किनभने तिनीहरू ताजा जस्तो छनौट गरिएका छैनन्, जस्तो कि चार्ट। आशा छ तपाईले मलाई मद्दत गर्नुभयो धन्यवाद ब्लगमा धेरै बधाई छ। चाडै भेटौला।
Mª Angeles लाई जवाफ दिनुहोस्
Mª एन्जलस तपाईलाई स्थिर तरकारीहरू प्रयोग गर्न कुनै समस्या छैन। म तिनीहरूलाई धेरै चोटि प्रयोग गर्छु र तिनीहरू राम्रो रूपमा बाहिर आउँछन्।
धेरै धेरै धन्यबाद, तर मैले तिनीहरूलाई पहिले डिफ्रोस्ट गर्नुपर्‍यो वा मैले सिधा सिसामा राखें। चुम्बनहरू
हेलो, सिल्भिया र इलेना मैले आज रातको लागि शुद्ध बनाउनु पर्छ, अन्तमा मैले बीनहरू र नयाँ एक्सेगसहरूसँग गरेको छु, मेरो आमा-इन-कानूनले मलाई कसरी तयारी गरेको छ भनेर वर्णन गरिएको छ। मैले उनीहरूलाई परीक्षा दिएँ र मेरो हसबैंड पनि रहेछ र हामीलाई यो धेरै धेरै मनपर्‍यो। तपाईको रसीदहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईको ब्लोकको लागि बधाई
MªAgegeles म खुशी छु कि तपाईलाई यो मनपर्दछ र यस तरिकाले तपाईलाई दैनिक थर्मोमिक्स प्रयोग गर्न प्रोत्साहन दिनुहुन्छ।
म माछासँग नराम्रो अवस्थामा छु, ही ही ही छ… तर मैले यो क्रीम प्रयोग गरी सकेको छु र मलाई माया छ !! धनी र स्वादिष्ट व्यंजनहरु राख्नु भएकोमा धन्यवाद।
पास्कुलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई खुशी छ कि तपाईलाई यस्ता व्यञ्जनहरू मनपर्दछ। सत्य यो हो कि यो हामीलाई अधिक माछा खान प्रोत्साहित गर्न एक आदर्श विधि हो।
नमस्कार, पहिले तपाइँलाई तपाइँको रेसिपीहरूमा बधाई दिन र दोस्रोमा तपाइँलाई प्रकाश दिन वा मलाई बताउनुहोस् जहाँ म बेबी प्यूरीहरूका लागि रेसिपीहरू पाउन सक्छु। धन्यवाद।
सुसाना, यो प्युरी हो कि मैले छोरीहरू जन्माउँदा उनीहरू बच्चाहरू थिए र हामीलाई यो यति मनपर्दछ कि यो पारिवारिक मेनूमा एक नुस्खा बनेको छ। म यसलाई तरकारीहरू र कुखुराको साथ पनि बनाउँछु, म तपाईंलाई नुस्खा छोड्दछु र म यसलाई सामान्यतया मासुको साथ बनाउनेछु, तर गाईको लागि कुखुरा बदल्दैछु।
नमस्कार, म प्रत्येक दिन तपाईंको ब्लग जाँच्दछु, मँ यो मेरो मनपर्नेमा गर्दछ
मेरो चार्टसँग एक प्रश्न छ, कि तपाईं केवल पातहरू थप्नुहुन्छ? धन्यबाद र शुभकामना
नुस्खाका लागि धेरै धेरै धन्यबाद, यो बौनाको लागि मात्र राम्रो होईन। मेरी आमा अहिले धेरै बिरामी हुनुहुन्छ र खान चाहन्न, यी व्यञ्जनहरू सहित यो उहाँलाई खाने कुरा मात्र तरिका हो।
बेललाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, यो धेरै राम्रो बाहिर आउँछ। यदि म रकम डबल गर्न चाहान्छु, सबै सामग्रीहरू डबलिंग बाहेक, के मैले पनि समय डबल गर्नु पर्छ?
र यदि म केवल तरकारी प्यूरी बनाउन चाहान्छु कि कति समय सम्म मैले यसलाई राख्नु पर्छ।
मइकालाई जवाफ दिनुहोस्